राष्ट्रिय महिला लिगको दोस्रो चरणका खेल आजदेखि - Rastrakokhabar
२४ माघ २०७७, शनिबार १०:४१
काठमाडौं, २४ माघ । राष्ट्रिय महिला लिग अन्तर्गत दोस्रो चरणको खेलहरु आजदेखि सुरु हुँदैछ । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आयोजनामा भइरहेको डबल लिग अन्तर्गत पहिलो चरणका खेलहरु सकिसकेका छन् । लिगमा तीन विभागीय र चार नगरपालिकारमहानगरपालिका टिमसहित ७ टिमले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
दोस्रो चरणको पहिलो खेलमा शनिवार विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब र उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाबीच खेल हुनेछ ।
सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा दिउँसो २ बजे खेल सुरु हुनेछ । पहिलो चरणमा आर्मीले चौदण्डीगढीलाई १२-० ले पराजित गरेको थियो ।
अंकतालिकामा दोस्रो स्थानमा रहेको आर्मी चौदण्डीलाई पराजित गर्दै लिग लिडर एपीएफसंथ अंक दूरी कम गर्ने योजनामा हुनेछ ।
पहिलो चरणको ६ खेलबाट १३ अंक जोडेर आर्मी दोस्रो स्थानमा छ । ६ वटै खेल हारेको चौदण्डीगढी अंकविहीन हुँदै पुछारमा छ ।
महिला लिगको साविक विजेतासमेत रहेको एपीएफ पहिलो चरणमा शतप्रतिशत जितसहित १८ अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा छ ।
पहिलो चरणमा विभागीय टोली पुलिसलाई स्तब्ध पारेको विराटनगर महानगरपालिका ६ खेलबाट १० अंकसहित तेस्रो स्थानमा छ । पुलिस र वालिङ समान ८ अंकसहित क्रमशस् चौथो र पाँचौ स्थानमा छ । चन्द्रपुर ३ अंकका साथ छैटौं स्थानमा छ ।
Previous Post	आजको राशिफल ( वि. सं. २०७७ माघ २४ गते शनिबार)
Next Post	देशलाई अस्थिरतातर्फ लैजान हुँदैन : रामचन्द्र पौडेल
पञ्जाव पुलिस विराट गोल्डकपको क्वाटरफाइनलमा
२८ चैत्र २०७७, शनिबार ०८:१३
२७ चैत्र २०७७, शुक्रबार १०:१९
सचिन तेन्दुलकर अस्पतालबाट डिस्चार्ज
२७ चैत्र २०७७, शुक्रबार ०७:१७